Naya Post Nepal | कस्तो ला’ज मर्दो काम ! आफ्नै मामाले १५ वर्ष टे’केकी सानी भान्जीलाई यौ”न दु’र्वव’हार गरी भगाएर लगेर य’स्तोसम्म गरे (भिडियो हेर्नुस्)
कस्तो ला’ज मर्दो काम ! आफ्नै मामाले १५ वर्ष टे’केकी सानी भान्जीलाई यौ”न दु’र्वव’हार गरी भगाएर लगेर य’स्तोसम्म गरे (भिडियो हेर्नुस्)
मोरङ जिल्लाको सुन्दरहरैचा नगरपालिका ९ घर भएकी १५ वर्षकि सुमना दनुवार मामा पर्नेसगँ फ’रार भएकी छिन । उनी इन्डिया घरमा भएका २४ वर्षका भरत वि.क सँग फ’रार भएकी हुन । १ महिना दे खी छोरी ह’राएको भन्दै सुमनकी आमा वसन्ती दनुवार मि’डियामा आ’एकि छिन । छोरी कक्षा ९ मा अध्ययन गर्दै आएको आमा वस न्तिको भ’नाइ छ ।
भरतको घर इन्डिया भएनी २ वर्ष अ’घि देखि उनी दिदिको घरमा ब’स्दै आएको ब’सन्तीले ब’ताएकी छिन् । छोरी सुमनाको सानै उ’ मेर भएकोले आफुले कहिले सं’का नगरेको आमा वसन्तीले ब’ता एकी छिन् । भरत पहिले देखी आफ्नो घर आउने जाने गरेको आ’ माको भनाइ छ । घरमा आउँदा नि मामा भान्जी साइनोले नै बो’ल्ने गरेको आमा वसन्तीले ब’ताएकी छिन ।
फरार हुनु भन्दा अघि बिहे खानको लागी पु’र्व झापा गएकि व’सन्ती कएहि दिन उतै ब’स्छु भनेर गएको भ’एता पनि केटाले फोन गरेको गरै गरेर दुई दिन अ’घि नै आएको आ’माको भ’नाइ छ ।बेलुकाको लगभग ५ बजे तिर बि’राटचोक आएकी सुमना घर नै न’आइ उ’तै बाट भरत सँग गएको आमा व’सन्तिको भनाइ छ ।
ह’राएकि सुमनालाई खो’ज्दै नेपालाको विभिन्न ठाउँ गएको उनले बताइ । आफुहरु भरतको घर इन्डिया समेत गएको आमाले ब’ता एकी छिन । भरतको घर इन्डिया जादा इन्डिया नआएको उसको परिवारले बता’एको व’सन्तीको भ’नाइ छ । यहाँ आए घर पठाइ दिन्छु भनी आफुहरुलाई भरतको परिवाले भनेको व’सन्तिले ब’ता एकी छिन ।
शनिबार साथीको मोबाइल र लुगा समेत लि’एर बिहेमा गएकी सुम ना बिहेबाट सोमबार घर फर्किन्छु भनेर हिडेको उनका काका काकि ले आफुलाई ब’ताएको व’सन्तीको भनाइ छ । रातिको ७ बजे सम्म घर नआएपछि खो’जी गरेको र भरतलाई फो’न गर्दा आफू बि’राट नगर छु भनेको व’सन्तीको भ’नाइ छ ।
भोलिपल्ट सुमनाको दाजुले भरतलाई फो’न गर्दा म सँग छैन बरु म नि’खोज्न लाई गाडी चडेर आउछु भनेको सुमनाको दिदिले ब’ताईन । भरत इटहरीमा सुन ब’नाउने काम गर्दै आएको सुम’नाको दि’दिको भ’नाइ छ । भरतको दिदिले फो’न गर्दा आफुले सुमना लाई लि’एर गएको भनी भरतले ब’ताएको वसन्तीको भनाइ छ ।
त्यसपछि भारत सँग स’म्पर्क हुन नसकेको सुमनाको दिदिले ब’ता एकी छिन् । भरत र सुमना बीच अ’नैतिक सम्बन्ध रहेको सबै गाउँ लेले आफुलाई सु’नाएको सुनाएको र आफुले त्यो बेलस भरतलाई समेत सो’धेको वसन्तीले ब’ताएकी छिन । सुमना र आफू बीच कुनै सम्बन्ध नह’रेको भनी भरतले त्यो बेला आफुलाई भनेको उनले ब’ ताईन ।
२०७८ पुष २७, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 140 Views